“Haddii goob uu shil ka dhacay aad sawir ka qaado ogow xabsi baa mudan kartaayee!” | Somaliska
Sanadkan cusub ee 2018-ka, waxaa si habsami ah u dhaqan galay qaar ka mid ah sharciyo dhowr ah oo la doonayo in dalka lugu dhaqo. Sharciyadaasi waxaa ka mid ah in la dhowro xogta bulshadda ee goobaha caamka ah sida maktabadaha iwm. Tani waxeey ka mid ah waxyaabaha aasaaska u ah horumarka bulsho iyo dal ahaaneed ee dalkan Iswiidhan.
Haddaba sanadkan ayaa sharciyadda la soo rogay ee dhaqan galay waxaa ka mid ah inaan muuqaaladda shaqsiyaadka aan lugu faafin karrin baraha bulshadda “iyadoo qaarkood lugu xumeeynayo shaqsiyaad” Waxaa sidoo kale ka mid ah inaadan sawir ka qaadi karin goob shil ka dhacay, halkaas oo ay ka muuqdaan dad dhibanayaal ah.
“Waa arrin wanaagsan oo aan soo dhaweeyneyno” ayuu yiri Gordon Grattidge oo ah madaxa urruradda aambalaasta ee midoobay. Sidaasi si la mid ah waxaa aad u soo dhaweeyey urruradda midoobeey ee qaabilsan Alarm-yada, qoraal ay soo dhigeen bartooda facebook ay ku leeyihiin ayey ku sheegeen in sanadkani la dhashay wanaagiisa soona dhaweeneynayaan sharcigan ee gebi ahaanba mamnuucaya in sawiro laga qaado dad ku wax yeeloobay shil dhacay.
“In sawirka la qaado uu ku faafo goobaha baraha bulshadda ayaa keeni kara xabsi la muteeysto, waloow aan sawir qaadistiis la mamnuucin hadana waa mid talaabadda horey loogu qaaday wado sax ah” ayuu yiri hadana Gordon oo intaas hadalkiisa ku daray in haatan dhibaato lugu qabo shacabka qaarkiis ee moobaayladooda sawirada kula roora.
“Waa mid dhaca markasta, haddii xitaa jidka dhinaciisa la taagan yahay waxaad arkeeysa moobaaylo kor loo hayo oo meel walba sawir lugu qaadayo” ayuu yiri markale Gordon oo sheegay in uu ku rajo weeyn yahay in dadku mar-kale ay ka fekeraan ka hor inta eeysan moobaylada la soo kala bixin oo eeysan sawirro ku qaadin. Wuxuu ugu dambeyntii sheegay in arrinta xiisaha leh ay tahay in haatan sharci noocan ah ay dowladdu tijaabineeyso, kaas oo wax badan oo wanaag ah soo kor dhin doono. Dowladda ayaa dhawaan soo saartay sharciyo cusub oo ka kooban dhowr iyo tobban qodob kuwaas oo sanadkan xilliyo kala duwan la filayo inuu dhaqan gallo.
Faa’iidada soo galootiga u leeyihiin Sweden oo lagu soo bandhigay cilmi baaris
Eskilstuna oo qaaday koobka kubada cagta Somaliska Sommarcupen